အီးမေးလ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု - Desktop အီးမေးလ်ဂလိုင်းများ
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတိုင်းဝဘ်အခြေပြုအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနေပုံရသည်။ ဒီလမ်းကြောင်းနောက်ကွယ်မှနံပါတ်များကိုတုန်လှုပ်စေသောဖြစ်ကြသည်။ Microsoft က Hotmail ကိုဝယ်ယူသောအခါ 8.5 သန်းကြေးပေးသွင်းသူ- ၎င်းသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် Microsoft ၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးမှာရှိသည် 250 သန်းအသုံးပြုသူများသည်ဂျီမေးလ်သုံးစွဲသူသန်း ၁၅၀ ရှိလာမည် ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ကွန်ရက်နည်းပညာကိုအကြီးမားဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက ဝဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်သည်အလွန်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်က web-based အီးမေးလ်ကိုသုံးသောလူသန်းပေါင်းများစွာထက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိုလျှင် desktop desktop client သို့ပြောင်းလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ကျွန်တော်တို့အများစုသည်ယခုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရသည် ရာနှင့်ချီသောမက်ဆေ့ခ်ျများ တစ်ရက်၏သင်တန်း၌တည်၏။ ၀ က်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တွင်သတင်းစကားတစ်ခုနှင့်သင်ကိုင်တွယ်သည့်အခါတိုင်း၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ဝေးလံခေါင်သီသောဝေးလံသော ၀ က်ဘ်ဆာဗာအချို့ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ Hotmail သည် message များကိုဖျက်ရန်အလွန်လွယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း Outlook, Thunderbird သို့မဟုတ် Mail.App တို့ကဲ့သို့မြန်ဆန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ တစ်စက္ကန့်ဝက်လျှင်တစ်စက္ကန့်လျှင်တစ်မိနစ်အလိုအရကြီးမားပုံမရပေ။ သို့သော်သင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကလစ်များနှင့်ဆက်ဆံပါကသင်သည်မိနစ်ပေါင်းများစွာဖြုန်းတီးနေသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ဂလိုင်း၏အမြန်နှုန်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မူမတည်ဘဲသင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူစည်ကားသော wifi ဟော့စပေါ့ကိုဖွင့်ပြီး Gmail တောင်မှတွန့်လိမ်သွားသည်။
Web-based အီးမေးလ်နှင့် desktop-based အီးမေးလ်အကြားအဓိကခြားနားချက်မှာ ဝင်ရောက်ခွင့်ခြေလှမ်းများ၏ sequence ကို။ အကယ်၍ သင်သည် Yahoo မှသတင်းစကားတစ်ခုတွင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုပူးတွဲပါက! စာ, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအမှန်တကယ်မပို့နိုင်မီ upload တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်၏သဘောသဘာဝသာဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှအကြောင်းအရာအားလုံးကိုအမှန်တကယ်ကူးပြောင်းသည်အထိ application သည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော်သင်၏ desktop အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်ရှိမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုသို့ဖိုင်တစ်ခုကိုပူးတွဲပါ၊ ဤဖိုင်သည် 1k (သို့) 10MB ဟုတ်မဟုတ်အရေးမကြီးပါ။ သငျသညျ snappy connection သို့မဟုတ်နာကျင်စွာနှေးကွေးသောတဆက်သွယ်မှုကိုပေါ်တွင်လျှင်ရှိမရှိအရေးမထားဘူး။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်အီးမေးလ်များကိုရေးသားရန်၊ ပူးတွဲဖိုင်များထည့်ရန်နှင့်ပေးပို့ရန်အတွက်တန်းစီရန်အွန်လိုင်းတွင်ပင်မရှိတော့ပါ! သင်၏ desktop အီးမေးလ်သည်ရိုးရာစာတိုက်ရိုးကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ မေးလ်ပို့သူနှင့်သင်နီးကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချိန်နှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာတိုင်းတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်သည်အင်္ဂါရပ်ရှေ့တွင်အနိုင်ရသင့်ပုံရသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်သည်ဘာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသူများကိုမလိုဘဲလျှောက်လွှာထဲသို့ကုဒ်အသစ်ထည့်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူများသည်အသစ်သောတီထွင်မှုအသစ်များကိုအမြဲတစေကြေငြာနေကြသည်။ Google Blog မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ကြေညာ အကယ်၍ သင်သည် Google Chrome ဘရောက်ဇာကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်သင်သည်သင်၏ desktop ပေါ်သို့ပူးတွဲဖိုင်များကိုဆွဲယူ။ ချနိုင်သည်။
စောင့်ပါ။ ပူးတွဲဖိုင်များကိုဆွဲချချပါ။ ကြည့်ကြရအောင်၊ ဒါက desktop အီးမေးလ်ဖောက်သည်တွေအတွက်ပါ အနည်းဆုံး 1997 ကတည်းက။ ပြီးတော့ဂူးဂဲလ်အကြောင်းပြောရရင်သူတို့ဟာ“ အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှု” အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောဝဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ဂလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်နှစ်နီးပါးနီးပါး။။ ၎င်းသည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ခန့်ကတည်းက desktop-based mail client တိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်မကောင်းပါ၊ web-based အီးမေးလ်ပရိသတ်များ။ သငျသညျအင်္ဂါရပ်များပြိုင်ပွဲအနိုင်ရမဟုတ်ပါဘူး။
ငါ့ကို paranoid လို့ခေါ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမင်းရဲ့အီးမေးလ်အားလုံးကိုအခမဲ့ပေးသူမှတစ်ဆင့်တိမ်တိုက်ထဲ၌နေရန်ယုံကြည်ဖို့စိတ်ကူးကိုမကြိုက်ဘူး။ တစ်ချိန်ကခဏ၌တည်၏ သဘာဝဘေးဒဏ် desktop-email client တစ်ခုဖြင့်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျအားလုံး၏အနည်းဆုံးကော်ပီနှစ်ခုအလိုအလျောက်ရရှိလိမ့်မည်။ မိတ္တူတစ်စောင်ကိုအွန်လိုင်းတွင်သိမ်းဆည်းပြီးနောက်တစ်ခုသည်သင်၏ desktop သုံးစွဲသူနှင့်ထပ်တူပြုသည်။ သင့်တွင်ကွန်ပျူတာများစွာရှိပါက (အများစုကိုကျွန်ုပ်စိတ်ကူးပါသည်) Martech Zone စာဖတ်သူများလုပ်) သင်အလိုအလြောကျမိတ္တူအများအပြားရှိသည်။
တကယ်တမ်းတွင် web-based mail client သည် desktop mail client ထက်ပိုကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုသာရှိသည်။ ချေးထားတဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုံးတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားစက်တစ်ခုသို့ ၀ င်ပြီးသင်၏အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးလိုပါကဘရောင်ဇာတစ်ခုပေါ်လျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်ခြင်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
သင်၏ desktop အီးမေးလ် client ကိုစနစ်တကျ configure လုပ်ပါက၎င်းသည်ပြanနာမဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အခြေပြုပံ့ပိုးသူမှတစ်ဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းပို့နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်လုံးဝအင်တာနက်စာမျက်နှာရှိရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုသင်ရနိုင်သည်။
... ဘာကြောင့်လူတိုင်းကမသုံးတာလဲ ကျနော့်သီအိုရီကအဲဒါဟာနည်းနည်းလေးအားစိုက်ထုတ်တာပဲ။ နှစ် ဦး စလုံးသော်လည်း ဇimbra နှင့် Thunderbird ကို နှင့် Windows Live Mail ကို လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ set up လုပ်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။ သင်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော web-based client နှင့်ရင်းနှီးပြီးသားဆိုလျှင်သင်ပြောင်းလဲရန်မလွယ်ကူပါ။
စဉ်းစားပါ ဦး desktop desktop အီးမေးလ်သို့ပြောင်းသည်။ မင်းသိသိသာသာတိုးလာတာကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ် အီးမေးလ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။ အရာရာကိုပြုလုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးသောကိရိယာများကိုသုံးပါ။
Tags: desktop ပေါ်ကdesktop အီးမေးလ်Gmail ကိုသဘောတားgmail ကိုနှိုင်းယှဉ်အလားအလာproductivityဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်
အရာအားလုံး၏ Antithesis လူမှု? တကယ်လား
16:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 25
@robbyslaughter အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သဘောမတူဘူး၊ နောက်တစ်ခုအကြောင်းပြမယ်။ Web client တစ်ခုအနေဖြင့် desktop client တစ်ခုထက် email ရယူရန်အချိန်နည်းသည်။ သုံးစွဲသူအများစုသည် bandwidth မြင့်မားသောအခြေခံအဆောက်အအုံတွင်မထိုင်ကြသော်လည်း web clients များမှာမူ!
ဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းများအတွက် ၀ က်ဘ်ဂလိုင်းသည်ဒေတာအညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆာဗာ၏စွမ်းအားတို့ကြောင့် desktop client ထက်အီးမေးလ်ကိုရှာဖွေရာတွင်များစွာမြန်ဆန်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ desktop ကိုရှာဖွေလျှင်ရလဒ်ရရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်၊ သို့သော် Google Apps သည်ချက်ချင်းဖြစ်သည်။
ငါသော်လည်း, အကြောက်လွန်ရောဂါအပေါ်သဘောတူကြဘူး။ ငါအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲငါ၏အအီးမေးလ်ကိုရယူနိုင်ခြင်းကြိုက်တယ်။
16:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 39
စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ၊ ၀ က်ဘ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကမှန်ကန်သည် ပြန်. ရယူ desktop client တစ်ခုထက် email ပိုမြန်သည်။ အကြောင်းမှာသင်က bandwidth မြင့်မားသောအခြေခံအားဖြင့်ပြောခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အီးမေးလ်ကိုနှေးကွေးစွာပဲသင့်ရဲ့ browser ဆီပို့ပေးရမယ်၊ (ဘာမှမရှိပါကအပိုဝက်ဘ် overhead အားလုံး၏နှေးကွေးသင့်သည်။ )
GMail ရှာဖွေခြင်းသည် Windows Search for Outlook ထက်ပိုမြန်သည်ကိုသင်မှန်ပါသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော hardware ကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်သော algorithms ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Google Desktop ရှာဖွေမှုကိုသင်၏ဒေသခံအီးမေးလ်ဂလိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါကဂျီမေးလ်ထက် ပို၍ မြန်သည်ဟုငါပြောမည်။
ထို့အပြင် GMail ၏အခြေခံအဆောက်အအုံအားဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသည်နှင့်၎င်းသည်အတော်လေးနှေးကွေးသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှသင့်အားပြသရမည့်ပြproblemနာရှိနေသေးသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုသင်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်တိမ်တိုက်၏အမြန်နှုန်းကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်၏ ၀ က်ဘ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခုန်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အလင်း၏အမြန်ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ရန် cloud ၏တွက်ချက်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်၏ desktop client သည်၎င်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
16:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 09
ပထမတစ်ခုကတော့ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုငါအငြင်းအခုံလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုငါတကယ်မထင်သောနေရာတိုင်းမှာပြောချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဝေးဝေးမှာ webmail ကိုသုံးဆဲဖြစ်လို့ desktop ကအဲဒါကိုမပယ်ဖျက်ပါဘူး။
Pro desktop - ကျွန်ုပ်မှာတက်ကြွစွာစောင့်ကြည့်နေသောအကောင့် (၃) ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အတွက် ၁ ခုအတွက် desktop client တစ်ခုသာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အလုပ်၏ groupwise အကောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် IMAP နှင့်အတော်အတန်ကွာခြားသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ အကယ်၍သာ မဟုတ်ခဲ့ပါက ၃ ခုစလုံးကိုတစ်နေရာတည်း၌ထားခြင်းကကောင်းသည်။ ငါ Thunderbird ကိုအရင်ကအဓိကအသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီ။
အကယ်၍ သင်သည်အော့ဖ်လိုင်းအချိန် / အခြေအနေများစွာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါကအီးမေးလ်ရှိလျှင်ကောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ဖြင့်သွားသည်။ မိုးသည်းထန်စွာခရီးသွားသူများအတွက် (ကောင်းကင်၌ wifi ကြိုတင်) ဤသည်မဖြစ်မနေဖြစ်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒေသခံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အခြားအရာများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Pro လို web - ဂျီမေးလ်တွင်အမြန်ရှာဖွေနေသည်၊ သို့သော်အခြားသူများမှာမူသိပ်မထူးလှပါ။ Groupwise ကွန်ရက်မေးလ်အနေဖြင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲစွာစုပ်ယူထားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသူတစ် ဦး ဦး အားအီးမေးလ်ဟောင်းအချို့ကိုရှာရန်အကြိမ်များစွာပြောပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် gmail နဲ့အတူကျွန်တော်အီးမေးလ်ကိုရှာဖွေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှအမြန်ဆုံးပါပဲ။ ဒီရှာဖွေမှုတွေမှာပါ ၀ င်ခဲ့ကြပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာ ၁၀၀% သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ငါ့ရဲ့ချက်တင်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကျေနပ်မိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ငါသင်ပြောနေတာ overhead တွေအများကြီးအများစုကိုအများစုတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် JS / HTML ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ဆိုဒ်ကိုလည်ပတ်နေခြင်းကိုရည်ညွှန်းနေပါကသင်၏ကွန်ပျူတာက၎င်းကို cache မှဖတ်ပြီးသင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိနေလျှင်၎င်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသွားလိမ့်မည်။ Desktop Client ကိုရယူရန်🙂သို့သော် webcafe ဥပမာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏လက်ပ်တော့ပ်သည် webmail ပစ္စည်းများကိုယာယီသိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်သဖြင့်ကြီးမားသောပြbeနာမဟုတ်ပါ။ အီးမေးလ်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိသောအခါ gmail သည်ခေါင်းစဉ်များအများနှင့်ပြည့်စုံသောအီးမေးလ်များကိုဖြတ်တောက်ထားသောဗားရှင်း (ဖြစ်နိုင်သည် json) ကိုသင်ပို့ပေးလိမ့်မည်။
Desktop Client သည်လည်း (သင်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှရပ်တန့်နိုင်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်အခါမျှချိန်ညှိချက်များနှင့်မကစားပါက) ပူးတွဲဖိုင်များကိုအလိုအလျောက် download လုပ်လိမ့်မည်။ gmail လူမဟုတ်သည့်အချိန်တွင်သင်၏မိသားစုမှရှေ့သို့ 10 Mega image ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းကိုသင်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ တစ်ချိန်ကသူတို့ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်နှင့်အဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့တွေ့မြင်လိုက်သောကြောင့်၎င်းအားသိမ်းဆည်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာလက်ရှိ GW desktop client ကိုပဲသုံးတယ်၊ ငါ့ရဲ့တခြားအကောင့် ၂ ခုမှာဝဘ်ကိုပဲသုံးတယ်။ ငါနှစ် ဦး စလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူသုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ခုသို့ built ပေမယ့်မကြာမီအချိန်မရွေးလာလိမ့်မည်ဟုသံသယနိုင်သည့်မျိုးစပ်ကမ္ဘာကြီးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ဝက်ဘ်သည်များသောအားဖြင့်အနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်အမြဲချောမွေ့ပုံရသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းအလိုက်ကွဲပြားသည်။
သြဂုတ် 17, 2010 မှာ 8: 28 AM
ငါထင်မြင်ချက်သည်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော (GMail vs Thunderbird) အကြားရှိသည်မဟုတ်၊ ပလက်ဖောင်း သာလွန်သောနည်းပညာစွမ်းရည်နှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏အီးမေးလ်ကိုရှာဖွေရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာအလွန်ထူးကဲသောဒေသဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်မျှမြန်ဆန်စွာရောက်နေစေကာမူသင်ရှာဖွေသည့်ရလဒ်များကို download ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပြန်တင်ရန်သင်၏ browser ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ချင်းစီ download ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပြန်ပေးရန်စောင့်နေရဆဲဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ memory နှင့် hard drive ကြားရှိ browser / Internet connection သည်နှေးကွေးသောကြောင့် desktop အီးမေးလ်သည်သာလွန်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
အသုံး ၀ င်မှုအရ ၀ က်ဘ်ဘရောက်ဆာတစ်ခု၏သဲအိတ်ထဲတွင်တစ်ခုခုလုပ်နေသည့် desktop application နှင့်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာရှိပါသည်။ သေချာတာပေါ့, ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာနေ့စဉ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာပြီနေကြသည်။ HTML5 ကို အသုံးပြု၍ ယခုအခါ browser တွင်အရာများကိုလုပ်နိုင်သည်။ သင် desktop ပေါ်တွင်သာလုပ်နိုင်သည်။ ၁၉၉၃၊ သေချာသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ browser ကိုလည်ပတ်စေသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆိုအလုပ်လုပ်သည်မှာအလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင် desktop အီးမေးလ်ဂလိုင်းသည်သင်၏အိမ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ရှိသကဲ့သို့၊ ဝက်ဘ်မေးလ် ၀ ယ်ယူသူကစာတိုက်မှပို့သောစာအုပ်တစ်အုပ်တည်းသာဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ desktop အီးမေးလ်ဂလိုင်းရှိဖို့ကပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ သင်၏ desktop client software သည်အဆင်မပြေသောကြောင့် web-client သို့သင်ပြန်သွားချင်ပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
17:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 35
@robbyslaughter, ငါပလက်ဖောင်းအကြောင်းပြောနေတာပဲ၊ ငါအဆုံးသတ်အချို့ကိုလွဲချော်သွားရင်ဒီပြissuesနာအချို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ desktop အီးမေးလ်ဂလိုင်းများအားလုံးဟာငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်ငါသုံးခဲ့တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုသာကိုးကားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကိစ္စကိုတစ်ခုတည်းသောအရာအဖြစ်လည်းမယူမှတ်ဘဲအခြားသူများကမူကွဲပြားခြားနားသောအရာများကို အသုံးပြု၍ အခြားသူများကမူကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မတူညီသောကိစ္စများရှိလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာရှာဖွေခြင်းတွင်၊ ဒေတာသည်ဒေသတွင်းဖြစ်သော်ငြားအမြဲတမ်းစက်ယန္တရားတစ်ခုတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်မှာ gigs data (အထူးသဖြင့်စနစ်တကျကောင်းမွန်စွာစီမံထားခြင်းမရှိသောအချက်အလက်များမပါ ၀ င်သောဒေတာ) ရှိလျှင်၎င်းသည် mail သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းသည် local ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာသည်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည် နောက်ကွယ်မှများစွာသောသူတို့၏တန်ခိုးနှင့်အတူဒေတာ။ Doug ၏ပြောကြားချက်အရ“ နှေးကွေးသော” အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည် (ထိုအချိန်တွင်သင်လိုအပ်သည့်အရာများနှင့်အတူအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဒေတာများကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်) သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အီးမေးလ်တစ်စောင်သာလျှင်ကောင်းပါသည်၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၁၀ စက္ကန့်ကဝက်ဘ်ဂလိုင်းပေါ်မှထိုအီးမေးလ်ကိုဖွင့်သောအခါ desktop ကဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သိပ်အရေးမကြီးပါ။
သင်၏အီးမေးလ်ပူးတွဲဖိုင်ကြီးများ ၀ င်လာပါကသင်၏ကွန်ပြူတာ desktop client သည်၎င်းကိုခဏကြာဝါးနေမည့်နေရာတွင်သင်အမှန်တကယ်မလိုအပ်ပါက၎င်းကိုဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုကြောင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ထံပေးပို့သောမိုက်မဲသောပူးတွဲဖိုင်တိုင်းကို download လုပ်ရန်မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် webmail နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအကြီးမားဆုံးကောင်းချီးဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်သောဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့ထူထပ်သောဖောက်သည်တန်ပြန်အစိတ်အပိုင်းများထက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အချက်အလက်တန်ချိန်များပါ ၀ င်သည့်အခါ ၄ င်းတို့ကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ ငါအသုံးပွုအမှုကိစ္စများတွင်ဤသည်မှန်ပေမယ့်ဒီကျိန်းသေသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမပြော။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာအပြီးသတ်သုံးစွဲသူကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှစ်မျိုးလုံးရဲ့အားသာချက်ကိုယူနိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝဟိုက်ဘရစ်နည်းလမ်း (HTML5 ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်) ကိုကြည့်ချင်နေတုန်းပဲ။ အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည့်သူများသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်လုံလောက်သည်ဟုခံစားရသည့်အချိန်တွင်သူတို့၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်ပိုများသည်။
17:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 13
ရှာဖွေရေးသည်အဝေးမှစက်ထက်ဒေသခံစက်ပေါ်တွင် ပို၍ မြန်သင့်သည်။ အမှန်တကယ်ပင်ဝေးလံသောစက်သည်သီအိုရီအရပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်သည် (အမှန်တကယ်တွင်စက်အစုအဝေးဖြစ်နိုင်သည်)၊ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်အချက်မှာ bandwidth ဖြစ်သည်၊
နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေနှင့်အချက်အလက်များ ၂၆၂,၀၀၀ ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်၏ Desktop ကို ၀.၁၉ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။ GMail ကရှာဖွေသည့်အချိန်ကိုသတင်းပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Google ၏အများပြည်သူရှာဖွေမှုတိုင်းသည်အနည်းဆုံး ၀.၂၇ စက္ကန့်သာကြာပါသည်။ ၎င်းသည်ဘီလီယံနှင့်ချီသော entries များဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကွန်ပျူတာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ရလဒ်များမှာပုံမှန်မဟုတ်ဟုယူဆကြပါစို့။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ရနိုင်သည်၊ ဒါကြောင့် ၀.၁၉ စက္ကန့်ကိုမြန်မြန် ၀.၁၁၉ စက္ကန့်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်။
ဒေတာအဝေးမှလွှဲပြောင်းရာတွင်အချိန်လိုအပ်သည်။ ငါဝေးလံခေါင်သီရှာဖွေရေးပံ့ပိုးပေးသူနှင့်ငါ့စက်အကြားဒေတာရွှေ့ဖို့အဘို့, latency နှင့် bandwidth ကိုလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Google Chrome ၏ Developer Tools တွင် Timeline panel ကိုဖွင့်ပြီး“ Search Mail” ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည် တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရယူခြင်း နေဆဲ 0.50 စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးမှရှာဖွေခြင်း: 0.50 s (latency) + 0.019 s + Rendering time = 0.519 စက္ကန့်
ဒေသတွင်းရှာဖွေမှု - 0.19 s + Rendering time = 0.19 စက္ကန့်
ငါ၏ဥပမာတွင်ရှာဖွေမှုသည်မည်မျှမြန်သည်ကိုအရေးမကြီးကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀x (သို့) ၁၀၀၀x (သို့) လက်ငင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုဒေသတွင်းရှာဖွေခြင်းထက်လွှဲပြောင်းရန်အချိန်ယူရ ဦး မည်။
ငါတို့ဆံပင်တွေကွဲနေပုံရတယ်။ တစ်စက္ကန့်တစ် ၀ က်မှစက္ကန့်၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံအကြားခြားနားချက်ကားအဘယ်နည်း။
17:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 25
ကျနော်တို့တိကျတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ထင်? ဂူဂဲလ် desktop သည်ငါနောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့သော mail client တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အချို့သောအရာများမည်မျှမြန်ဆန်သည်ကိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့ကျကျ desktop desktop mail client များကောင်းစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ ကျွန်တော့်နှင့် Doug ၏အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်မကြားရပါ။ အဘယ်သူမျှမကသူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နီးကပ်မချဉ်းကပ်လာသောအခါသီအိုရီဆိုင်ရာဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုခုချအောင်နိုင်သူတစ်ခုခုလုပ်မပေးပါဘူး။
ဤရွေ့ကား, ကျိန်းသေအထူအခနျးငယျအငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။ အရာတစ်ခုခုသည်ပါးလွှာသည်ဖြစ်စေ၊ ထူသည်ဖြစ်စေမသည်မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းခြင်းသို့ရောက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အရာဖြစ်လာသည့်အခါသေချာသည်။ Web client များသည် HTML5 နှင့်ပိုမိုထူထပ်လာသည်နှင့်အမျှဝေးနေသေးသော system မှလုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသောအလုပ်အများစုနှင့်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒေသအလိုက်အနည်းငယ်အကူအညီဖြင့်၎င်းတို့သည်ပါးနပ်သေးသည်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်၏ gmail တုန့်ပြန်မှုအချိန်သည်သင်နှင့်ဆင်တူသော်လည်းသင်၏ဒိုမိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဂူဂယ်လ်အပလီကေးရှင်းများသည် ၁၂၅-၁၅၀ မိနစ်ခန့်ရှိသည်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများရှိပေမယ့်“ Desktop အီးမေးလ်ကအနိုင်ရရှိပြီးလက်ကိုချ!” ဟုပြောရန် ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှုမှကြွလာသောအခါရုံလမ်းကိုချွတ်သည်။
17:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 51
ဂူဂဲလ် desktop ကို local mail archive အတွက်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးလ်စတိုးကိုရှာဖွေရာတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအတိုင်းအတာဖြင့်အသုံးပြုသည်) အလွန်လျင်မြန်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ၊ Desktop ဖောက်သည်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်၊ ပို၍ စိတ်ချရသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသဖြင့်အားလုံးနီးပါးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ချက်များရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာသင်သည်အခြားကွန်ပြူတာတစ်ခုမှ ၀ က်ဘ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုဖောက်သည်များထဲမှသင့်စာကိုလက်လှမ်းမီမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်၎င်းနေရာနှစ်ခုလုံးတွင်ထပ်တူပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
ငါထင်တာကတော့ AJAX ကိုသိပ်ပြီးမသုံးတဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်တော့ client ကတော်တော်လေးပါးလွှာတယ်ဆိုတာမင်းပြောနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ထိုအခြေအနေတွင် browser သည် static pages များကိုသာဖော်ပြနေပြီး remote server ကဘာကိုပြရမည်ကိုဆုံးဖြတ်နေသည်။ သို့သော်သင်ရေကြောင်းသွားလျှင် ကုဒ်၏သန်းဝက်သန်းလိုင်းများ client execute အတွက် client သည်၎င်းမျဉ်းသည်အနည်းဆုံးမှုန်ဝါးစပြုနေပုံရသည်။ သင်၏ Windows သည်“ စကားမပြောနိုင်သော terminal” ဖြစ်နိုင်သည့် X Windows ၏ရှေးခေတ်ကာလမဟုတ်ပါ။ သေချာတာပေါ့, လေးလံသောရုတ်သိမ်းအများစု browser ကိုပြုလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုသင် "ရိုးရှင်းသော HTML မြင်ကွင်း" သို့ပြောင်းလဲခြင်းမပြုပဲသင်၏ဘရောက်ဇာအဟောင်းတွင် Gmail ကိုမ run နိုင်ခြင်းကပြသည်။
Desktop mail client များ (လက်တွေ့ကျကျရော၊ သီအိုရီအရ) ကျွန်ုပ်သိနိူင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာမရှိသောအခါသင့် mail ကိုရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ကိစ္စရပ်များတွင် ၀ က်ဘ်မေးလ်မရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အားနည်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ဟုထင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ပို့စ်၏အဓိကအချက်မှာသန်းနှင့်ချီသောလူများသည် desktop mail ကိုအဓိကကျသော mail platform အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသော်လည်း web-based အီးမေးလ်ကိုသီးသန့်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအားသာချက်များဟာ web-based အီးမေးလ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်ဖြစ်တဲ့ချေးထားတဲ့ကွန်ပျူတာကနေသုံးလို့ရတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းကဲ့သို့သောအခြားရိပ်မိသည့်အားသာချက်များကိုသာရိပ်မိကြသည်။
ဒါကြောင့်ငါပြောတာက "desktop အီးမေးလ်ဖောက်သည်များလက်လျှော့လိုက်သည်!" 🙂
18:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 55
ကျွန်ုပ်သည် Doug နှင့်သဘောတူသည်။ Outlook တွင်ရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း (အခြားသူများအတွက်သေချာမသိ) Google မှာ pat indexing လုပ်နေပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါရှာဖွေနေတဲ့ process ကိုမြန်စေဖို့နဲ့ငါ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရှိန်အဟုန်ကိုမြှင့်တင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် desktop ပေါ်မှာ indexing ကိုတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ဂူးဂဲလ်ကငါထက်မြန်တဲ့နှုန်းမြန်နှုန်းရှိမယ်ထင်တယ်။ 🙂
ဧပြီ 1, 2011 မှာ 5: 55 pm တွင်
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၁ တွင်ရှိနေပြီးသင်၏အကြောက်လွန်ရောဂါအငြင်းပွားမှုများ မှလွဲ၍ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အမြန်နှုန်း - ဂျီမေးလ်သည် Outlook ထက်တင်ပို့ခြင်းထက်မြန်သည်၊ စာပို့ခြင်းတွင်မြန်သည်
အချိန်ကာလ - Gmail ကသင်ပြောနေသောစွမ်းရည်အားလုံးကိုပေးထားသည်
ထူးခြားချက်များ - ActiveInbox browser ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် Gmail
စကားပြောဆိုမှုအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီမက်ဆေ့ခ်ျများတွေ့နိုင်ပါသည်
၎င်းသည် desktop အီးမေးလ်အင်္ဂါရပ်များထက်ကောင်းပါသလား။ မဟုတ်ဘူး ၎င်းတို့သည် local disk space ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခက်အခဲနှင့်ညီမျှပြီးမြန်ဆန်သလား။ ဟုတ်တယ်။
အမြဲတမ်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသူမည်သူမဆို Gmail + ActiveInbox ကဲ့သို့သောအားကောင်းတဲ့ browser အီးမေးလ်စနစ်ကိုသုံးပြီးမှလွဲလျှင်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
မေလ 19, 2011 မှာ 1: 29 AM
မင်းရဲ့ဂျီမေးလ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာကိုငါလုံးဝသဘောတူတယ် ကျွန်ုပ်၏ desktop client သည်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သောဂျီမေးလ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Dinosaur ကဲ့သို့အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော်ငါနေဆဲကကြိုက်တတ်တဲ့။
19:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 58
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂျီမေးလ်တွင်အမျိုးအစားအလိုက်နေ့စွဲအင်္ဂါရပ်မရှိပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အဲဒါဟာလုံးဝမိုက်မဲရာပါ။ သို့သော်ဂျီမေးလ်သည်၎င်းကိုမလုပ်နိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ဒီအင်္ဂါရပ်မျိုးကိုငြင်းခုံစရာအကြောင်းသိပ်မရှိပါဘူး၊
သို့သော်၊ web-based အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်သူများအတွက်သင်မတတ်နိုင်သောအရာများရှိပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ data portability ဖြစ်သည်။ Desktop Client သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုဒေသအလိုက်သိမ်းဆည်းပေးသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောပံ့ပိုးပေးသူများက၎င်းကိုမတော်တဆဖျက်မိနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်ဝဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ကိုကန့်သတ်ထားသလောက် desktop အီးမေးလ်၏“ အင်္ဂါရပ်” မဟုတ်ပါ။
ဧပြီ 19, 2011 မှာ 5: 27 pm တွင်
ငါတကယ်စာရေးသူနှင့်အတူပါပဲ။ သူ့ကို ၂၀၁၁ မြင်ကွင်းကနေထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါရစေ။
သဘောတူတယ်။ ဂျီမေးကအဲဒါကိုမှကြွလာသောအခါတော်တော်လေးအတိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် desktop mail ကမည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်လိုက်ဖက်သနည်း။ တ ဦး တည်းအရာများအတွက်အင်တာနက်မျှဝေခဲ့သည်။ ယင်း၏ပိုပိုပြီးထူးခြားလာခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်ပြုလုပ်သောခြားနားချက်ကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာစာတစ်စောင်နှစ်စောင်ဖတ်နေရင် gmail ကပိုမြန်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကို ၂၀၊ ၃၀၊ ၅၀ နဲ့ desktop ကိုတော်တော်များများကအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ပါ။ သင်ကအောက်ကိုဆင်းနှိပ်ရုံနှင့်သင်တစ်ချိန်တည်းမှာ previewing / ဖတ်နေစဉ်ဖတ်အဖြစ်မှတ်သားနေကြသည်။ မေးလ် (၁) ခုအတွက် gmail ကအနိုင်ရသူလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
သဘောတူ gmail ကပထမအပိုင်းကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ် သို့သော်ကျွန်ုပ်သာလျှင် desktop ပေါ်တွင်ပေးသော Send- dont care ချဉ်းကပ်မှုကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်း၏နီးပါးရှိ Gmail ထဲမှာပေမယ့်မ။ ဒုတိယအော့ဖ်လိုင်းအပိုင်းမှာတော့ googles offline mail ကိုအသုံးမပြုရင်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါက desktop နဲ့ webmail ကြားကတကယ့်ကိုပါးလွှာတယ်။
ဝဘ် / ဂျီမေးလ်မှာပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေရှိတယ်လို့မင်းပြောတာကိုငါနားမလည်ဘူး။ ဒါဟာကျနော့်အမြင်အတွက် preference ကိုမှဆင်းလာပါတယ်
ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး (ငါခန့်မှန်း !!)
မေလ 19, 2011 မှာ 1: 25 AM
Desktop အီးမေးလ်ဂလိုင်းများကိုဂျီမေးလ်သည်အင်္ဂါရပ်များပေါ်တွင် desktop ဖောက်သည်များကိုအနိုင်ယူသည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောမတူသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤစာမူတွင်ဖော်ပြထားသည်ထက်ပိုမိုများပြားသည် (ဥပမာ Google Docs နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကဲ့သို့) ရှိသည်။
desktop client များရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအင်္ဂါရပ်ကသူတို့ဟာမတူညီတဲ့ဒိုမိန်းများမှ (ဥပမာ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်လိပ်စာများ) မှအီးမေးလ်စာပုံးများကိုတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်၊ သုံးစွဲသူဖော်ရွေတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုထဲသို့ပေါင်းစည်းခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအီးမေးလ်များသည်အော့ဖ်လိုင်းစတိုးများဖြစ်ကြောင်း။
ကျွန်ုပ်၌ desktop client များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမျှမဖြေရှင်းနိုင်သောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်
- အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုဖြင့် desktop အီးမေးလ်ဖောက်သည် ၂ ခုကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ငါတို့မှာ e-store ရှိတယ်၊ ငါတို့ Desktop အီးမေးလ်ဖောက်သည်တွေဆီက customer support အီးမေးလ်တွေကိုလက်ခံချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ support email address တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ desktop client နှစ်ခုစလုံးနဲ့ set up လုပ်လို့ရမလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop client များမှာ MacMail နှင့် Outlook 2007 ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအီးမေးလ်လိပ်စာအက် (ဖ်) အက်မင် (panel) တွင်မဟုတ်ဘဲ Desktop ဖောက်သည်များအတွင်း၌တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒါကြောင့်လည်းငါလုပ်ဖို့ OK ကိုဖြစ်သင့်သည်ထင်ဒါကြောင့်?
ကျွန်ုပ်၏ e-store ၏ 'personal customer service consultant' ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးခဲ့သည်။ သူကမရေမရာဆီလျှော်တဲ့ပြန်ကြားချက်အနည်းငယ်နဲ့ရောက်လာတယ်။ အခုတော့ငါက“ အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်တွေအတွက် Apple ဒါမှမဟုတ်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်” …အမှိုက်။
ငါသည်လည်းမေးခွန်းတစ်ခုတင်ခဲ့သည် ဒီမှာ (Quora အပေါ်) နှင့် Twitter ပေါ်တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, အဘယ်သူမျှမပြန်ကြားချက်များ။
ငါကြိုးစားရုံကအလုပ်လုပ်လျှင်ကြည့်ရှုနိုင်ဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ သူပြန်လာသောအခါသူ၏ Outlook တွင်အီးမေးလ်ကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမျှဝေလို့ရမလားဆိုတာကြိုတင်သိချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါသူ့ကိုမကြည့်ဘဲမကြည့်ဘဲအခြားအတွေးတစ်ခုကိုကြိုတင်သိနိုင်ပါတယ်။
မေလ 19, 2011 မှာ 1: 28 AM
PAP အစား IMAP ကိုအသုံးပြုပါကဖောက်သည်သည်ထပ်တူပြုမည်မဟုတ်ပါ
ဒေါင်းလုပ် ငါဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းနှင့် IMAP ကို ​​သုံး၍ ကွဲပြားသောဖောက်သည် ၄ ​​ယောက်ရှိသည်
မေလ 19, 2011 မှာ 1: 52 AM
ဒေါက်ဂလပ်, သင်တို့နဲ့ငါရှိနေမယ်မသေချာဘူး POP အစား IMAP ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကဟုတ်ကဲ့လား။ MacMail နဲ့ Outlook မှာ IMAP ကိုသုံးလို့ရမလား။
ငါမည်သည့် app ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည် MacMail နှင့်အတူနေခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာအထက်ပါအားသာချက်များကြောင့် -
ကျွန်ုပ်၏စီးပွားဖက်သည် Outlook ကိုသာသုံးနိုင်သည်။ အက်ပ်ကိုပြောင်းခြင်း ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သူသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်သော၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးကောင်းစွာဆက်သွယ်ထားသောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူရှိလျှင်ကွန်ပျူတာကိုသာထိမိသည်။ သူသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောစနစ်တစ်ခုကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသူအချိန်ယူလုပ်ကိုင်လိုသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်အတွက် Outlook မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအီးမေးလ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးအင်တာဖေ့စ်ဟာသူ့အတွက်ပုံမှန် 100% စီးပွားရေးဖြစ်ရမယ်။
မေလ 19, 2011 မှာ 1: 58 AM
ဟုတ်ကဲ့၊ IMAP ဟာ MacMail မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အချို့ဝန်ဆောင်မှုများသည် POP ကိုသာထောက်ပံ့သည်။
မေလ 19, 2011 မှာ 2: 09 AM
ထို့ကြောင့်သင်၏ပြန်ကြားချက်မှာဟုတ်သည်၊ ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ POP အစား IMAP ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ desktop အီးမေးလ်ဖောက်သည်နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တူညီသောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
မေလ 19, 2011 မှာ 2: 53 AM
မေလ 19, 2011 မှာ 2: 00 AM
ဆာ ငါ MacMail interface ရှိအခြားအီးမေးလ်အကောင့်များနှင့်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏ desktop client (ထောက်ခံမှုအီးမေးလ်များ) ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း (၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်ပြီးပြီ) ကိုလည်းရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကငါ့မေးခွန်းအတွက်အခြေခံပါပဲ
ကျွန်ုပ် gmail အကောင့်နှင့်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ desktop client သို့အီးမေးလ်များပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စနစ်တကျမတပ်ဆင်ထားပါကကျွန်ုပ်၏ desktop client မှဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင်မေးခွန်းမှာ၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည်မှာ (လွယ်ကူသည်) မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ desktop desktop email2ခုအား support အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုဖြင့်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်မလား။